Fitaizana no Demokrasia. Fitaizana hahalala tokoa ny zavatra rehetra ary hitazona mafy izay tsara indrindra. Fitaizana ho fahalalana, fitaizana ho fihavanana, fitaizana ho fahalalam-pomba, fitaizana ho fifanajana, fitaizana ho fahamendrehana, fitaizana ho fiaraha-monina, fitaizana ho fahendrena.
Demokrasia ho fifanajan’ny zo tsirairay tsy mifanitsaka, tsy mifandrahona, tsy mifanelingelina. Demokrasia lanja miakatra amin’ny tsara kokoa hatrany fa tsy demokrasia mandrorona isan’andro vaky.
Fianarana ny Demokrasia. Ny soa fianatra, ny tsara fakan-tahaka. Tsy misy antony mihitsy tsy ahatakaran’ny Gasy fiaraha-monina mirindra ara-politika, ara-toe-karena, ara-piaraha-monina, tahaka izay fahita any amin’ny firenena tandrefana tsiriritintsika, eny fa na dia ny firohotantsika mila ravinahitra any fotsiny aza.
Fitaizana ny Demokrasia. Fifampitaizana. Ny zo mitaky andraikitra. Ny fahalalahana tsy baranahina. Ny fitovian-jo tsy manandoka saranga ho fanjakan’ny madinika.
Fanjakana ny Demokrasia fa tsy jadona. Fitondrana araka ny Lalàna. Fitondrana araka ny Hitsiny sy ny Rariny. Fahefana misy tombana, fahefana misy tambiny, fahefana refesi-mandidy.
Ny Lalàna tsara indrindra dia izay mifandraika amin’ny fiaraha-monina iray amin’ny fotoana iray fa tsy teren-ko masaka tahaka ny voalobo-jaza. Antenimiera izany.
Taona 1810, izao no hafatr’Andrianampoinimerina tamin’Ilaidama handimby azy teo imason’ireo Mpanolo-tsaina sy Mpihevi-panjakana: «Aleo adaladala Andriana toy izay adaladala loholona. Fa ny tsara mpihevitra no manjaka andria-maha-fiadanana. Aza ilazam-bohony, aza fitahina, fa ny (Mpitondra) tsy mba manan-kavana, tsy mba manana iray tampo, fa izay mankato ny teniny sy mino ny lalàny no havany. Ny tondro tokana tsy mahazo hao, ny hazo tokana tsy mba ala, fa ny hevitry ny maro no fanjakana ka tsy handà izay marina heverin’ny be».
Farany, ity kosa sombin’ny Hafatr’ilay Ombiasy tamin’ny zanany: «Ny fanahy raha tsy fahanam-pahendrena sy fianarana dia osa ary tsy vanon-ko inona. Sakaiza sy namana tokoa izay mampianatra fahendrena marina. Ny fahendrena rehefa tafiditra ao an-tsaina tokoa dia tsy azon’ny fahavalo sy ny olon-dratsy esorina. Ny vola sy ny zavatra hafa zaraina mangingina sy am-pahibemaso amin’ny loholona dia jono manafina ny heviny. Aza avelanao hanakaiky anao ny mpandrobo sy ny mpandroba, ary izay rehetra manao ny vola sy ny fananana sasany ho mahasolo ny fahendrena, roahy lavitra izy fa mamahan-dalitra».
Pêches illicites – Impliquer les communautés à la surveillance
Anatihazo Isotry – Deux braqueurs pris en possession des butins
Législatives – Aucune trace du parti HVM